Warshaddii iyo alaab-qeybiyeyaashii shirkadda DX ee la hakin jiray oo la joojiyay | Hawada
Unugga Qabashada Hawada ee DX oo la joojiyay
Dhismaha Ganacsi Xalka Hawada & Heerkulka
Tikniyoolajiyadda Sawaxanka Sare ee Sare
Qaabdhismeedka Kala Beddelka Heat-3 Nooca ah
3-dhinac ku-beddelaha kuleylka nooca U-ga ah wuxuu si wax ku ool ah u adeegsadaa hawo-mareenka, wuxuu si buuxda u ballaariyaa aagga wareejinta kuleylka wuxuuna si weyn u hagaajiyaa ku-wareejinta kuleylka iyada oo aan la kordhin qeybta booska.
Qaab dhismeedka is haysta, xoog sare, ku habboon rakibidda iyo dayactirka. Aluminium fin oo leh filim hydrophilic ah ayaa la ansixiyay si loo hagaajiyo isku dheelitirka kuleylka ee filimka qoyan iyo guud ahaan isku dheelitirka kuleylka ee cutubka.
Naqshadaynta Tubada Dheer
Dhererka isku xirka tuubada tuubada udhaxeysa qeybta gudaha iyo banaanka waxay noqon kartaa 50m, halka hoos u dhaca ugu badanna uu yahay 25m. Way ku habboon tahay rakibidda qaybta gudaha iyo dibedda goobta mashruuca.
Wareejinta Kuleylka Waxtarka Badan
Tuubada Copper-ka oo leh tooth7.94 ilig sare iyo dun sare oo gudaha ah, xaddiga socodka dhexdhexaadka ah, is-weydaarsiga kuleylka iyo kala-soocidda waxqabadka dhammaystiran ayaa ugu fiican.
Sp7 kala dheereynta tuubada naxaasta ah aad ayey uyar tahay, saameynta dhaxan ee wareejinta kuleylka, dhumucda dhaxan, waxay saameysaa waqtiga barafka.
Xakameynta fiilada waa mid fudud oo kalsooni leh, taas oo inta badan khuseysa aagagga ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
* Nooca bamka kuleylka: qaboojinta / kuleylka / hawo nadiif ah
*Kala duwanaanta heerkulka: 16 ~ 32 ° C
*Wakhtiga shidida ama daminta
*Qalabka LCD, oo muujinaya heerkulka dejinta, qaabka hawlgalka, saacadda waqtiga dhabta ah (ikhtiyaar),
usbuuc (ikhtiyaari ah), shidasho / damis, iyo cilad.
*Si otomatig ah dib u bilow kadib markaad dib isugu xirto korantada
Nidaamka Xakamaynta Waxqabadka
Nidaamka dhismaha ee ku saleysan MODBUS wuxuu ku xirmi karaa nidaamka xakamaynta dhexe ee isgaarsiinta MODBUS, isagoo ogaanaya koontaroolka dhexe iyada oo aan lagu xirin qalabka beddelka, kaas oo ku habboon nidaamka qaboojiyaha hawo dhexdhexaad ah ama baaxad weyn leh.
Dareemayaasha Heerkulka Labba
Naqshad casriyeysan oo leh laba dareemayaal heerkulka, mid ka mid ah hawo-soo-celinta, iyo mid ka mid ah guddiga xakamaynta,
si loo ogaado heerkulka gudaha ee qolka, oo loo hubiyo in dabaysha kulul (kululaynta xilliga qaboobaha)
mode) waxaa loo diri lahaa gees kasta oo ka mid ah qolka si isku mid ah.
Ka Hortagga Dabaysha Qabow, si loo helo Raaxada ugu wanaagsan ee kululaynta
Kuleylinta xilliga qaboobaha, marka AHU bilaabmo, gariiradda-fin-ka ayaa horay loo sii kululeyn doonaa ka hor intaan fanku saabbadeedku bilaabmin; marka AHU ay ku jirto xaalad dhalaal, AHU taageere sahay ayaa istaagi doona; markii barafaynta ay dhammaato, ka
Coil-fin sidoo kale waa la sii kululeyn doonaa ka hor intaan mar labaad fanku bilaabin.
Faahfaahinta Unugga Qabashada Hawada ee DX oo la joojiyay
Hore: Baadhitaanka Tayada ee Nidaamka Chiller Chiller - LHVE Taxanaha Joogtada ah ee Magnet Isugeynta Iskucelcelinta Soo noqnoqoshada Iskuwareejinta Chiller - Airwoods
Xiga: Nadiifinta Xogta Aluminium
Nidaamyada Hawada Hawada
Qolka Nadiifinta Hawada ee Hawada
Qeybta Qabashada Hawada ee Dx
Qaybta Qabashada Hawada ee Saqafka Sare
Noocyada Nabaad guurinta Noocyada Hawlaha Hawada
Unugyada Qabashada Hawo Soo Celinta Heat
Saqafka Heat saar Energy Heat Recovery hawo ...